नेकपा भरतपुरलाई जनता र प्रविधिसँग जोड्छौं : न्यौपाने - Chitwan Online Khabar
२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १६:४६
अध्यक्ष, भरतपुर महानगर कमिटी
देशभरका ६ महानगर कमिटी जिल्ला कमिटी सरहको हैसियतमा छन् । भरतपुर महानगर कमिटीको अध्यक्ष बनिसकेपछि महानगर कमिटीका गतिविधि, सञ्चालन र सांगठनिक कामहरू कसरी भइरहेको छ भनेर अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :
प्रश्न : तपाइँ महानगर कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभयो, यो पद अपेक्षाकृत नै थियो कि थिएन ?
प्रश्न : एकीकरण प्रकृया अझैं पूरा भएको छैन, कार्यकर्ताको मनोभावना कस्तो पाउनु भएको छ ?
प्रश्न :महानगर कमिटीले पूर्णता पाएको छैन काम गर्न असहजता के के हुन् ?
प्रश्न : महानगर कमिटी गठनमा समस्या उल्झन खास के हो ?
प्रश्न : महानगर कमिटिको अध्यक्ष, सचिव र इन्चार्ज चयन नहुँदै महागनरका वडा कमिटी बने यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
प्रश्न : महानगर कमिटी अध्यक्षलाई नेकपा चितवनको जिल्ला कार्यालय टिममा नराख्नुको कारण के हो ?
प्रश्न : महानगर कमिटी कसरी चलाउने सोच बनाउनुभएको छ ?
प्रश्न : आधारभूत तहका जनताका समस्यामा सहयोग गर्छौ भन्नुभयो कसरी ?
प्रश्न ः अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँले महानगरपािलकाको कुरा पनि निकाल्नुभयो, महानगरको प्रमुख नै महानगर कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ,
प्रश्न: महानगरले पार्टी चलाउँछ की पार्टीले महानगर ?
प्रश्न : अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने कुराहरु छन् की ?
आज संविधान दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईदै
चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा एक बालिका घाइते